Apple Inoburitsa Beta 1 ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.1 | Ndinobva mac
Apple Inoburitsa macOS Yakakwira Sierra 1 Beta 10.13.1
Masikati ano Apple ichangoburitsa ese beta 1s eakasiyana masisitimu anoshanda. Mune ino kesi, yekutanga kusvika yanga iri macOS High Sierra 10.13.1 uyezve mamwe ese matsva e beta vhezheni evanogadzira tvOS 11, watchOS 4.1 uye iOS.
Apple hairegi yakareba nguva ichipfuura kubva iyo yepamutemo vhezheni ye MacOS Yakakwira Sierra uye vanogoneswa vanogadzira Ivo vatove neiyo yavo nyowani vhezheni inowanikwa mune yekuvandudza nzvimbo. Ivo havatarisiri shanduko huru uye pamusoro penzira dzese dzakanangana nekugadzirisa kutadza kweichi chekutanga chepamutemo vhezheni yeMacOS High Sierra.
Izvo zvinokwanisika kuti mukuwedzera kune aya mabug fixes shanduko diki dzinowedzerwa Mune ino yekutanga beta vhezheni, iyo Cupertino vakomana vane zvimwe zvigadziriso zvakamirira iyi vhezheni isina kuwedzerwa panguva yekutanga. Parizvino zvayedza kuti tione kuti idzi nhau chii uye isu tichafanirwa kumirira kuti tione zvakanyatsojeka sezvo isu tichingotaura nezve chaiwo bug fixes uye system kugadzikana kugadzirisa.
Izvo zviri pachena ndezvekuti parizvino dandemutande revashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta havana iyi vhezheni yekutanga inowanikwa, zvirinani patiri kunyora, zvinokwanisika kuti mumaawa mashoma anotevera ichasvika uye kana izvi zvinoitika tichazviwedzera kuChinyorwa. Parizvino Iwe unofanirwa kuona nhau uye kana izvi zvichinyatso kukosha kana kwete mukushanda kweMacOS High Sierra, iyo parizvino inoita senge inoshanda chaizvo kune vazhinji vashandisi vakaiisa paMac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple Inoburitsa macOS Yakakwira Sierra 1 Beta 10.13.1
Apple inoburitsa watchOS 4.1 yeApple Watch Series 3
Fusion 10 uye Fusion 10 Pro izvozvi zvave kuwanikwa kune macOS High Sierra